Umaki: okuqukethwe kwe-b2b | Martech Zone
Maka: okuqukethwe yi-b2b
Isimo Esiguqukayo Ekumaketheni Okuqukethwe kwe-B2B (ngezibalo)
NgoLwesibili, Agasti 25, 2015 NgoLwesibili, Agasti 25, 2015 Douglas Karr
I-Economist Group yenze ucwaningo olunzulu nokuhlaziya izimo zengqondo ze-B2B futhi yakhiqiza le infographic ngemiphumela. Ngombuzo ngamunye, kunokuqhathaniswa komakadebona bebhizinisi kuqhathaniswa nesizukulwane esilandelayo sabathengi bebhizinisi. Kuyathakazelisa ukubona igebe elibalulekile phakathi kwalokhu okubili. Ekubukezeni izikhala, kukhona umehluko othakazelisayo Omakadebona bezebhizinisi bathola imibiko yocwaningo ilusizo ngokwedlulele ngama-35%! Omakadebona kwezamabhizinisi, ngama-26%, basebenzisa okungenani abane
NgeSonto, Agasti 11, 2013 NgoMgqibelo, Agasti 10, 2013 Douglas Karr
Lapho sikhuluma nezinkampani ezisebenzela abathengi, bahlala bebuza ukuthi ngabe sike sasebenza nanoma yiziphi izinkampani ze-B2C. Lapho sikhuluma nezinkampani ze-B2B, bayabuza ukuthi ngabe sike sasebenza nezinkampani ze-B2B. Ngokwethembeka konke, amasu ayafana kakhulu… yizinombolo nenqubo yokuthenga eyehlukile. Kodwa-ke, siyawubona umehluko enzuzweni ngokuthenga ngakunye. Izinkampani ze-B2C zivame ukuncika ekuqondeni kwamanani aphezulu kakhulu nemali engenayo ephansi ngokuthenga ngakunye
Kuleli sonto ngisebenza kwisethulo sengqungquthela yeWebtrends Engage. Isihloko sami sicace bha futhi nesikhawu sesikhathi sifushane kakhulu (imizuzu eyi-10), ngakho-ke kunginikeza inselelo yokwenza isethulo esisodwa! Ngicelwe ukuthi ngikhulume ne-B2B Blogging ephumelelayo. Nginciphise izinkinobho zeBusiness to Business Blogging phansi kumaqhinga ahlukile we-5 wesethulo: Yiba ngaphambili. Akwanele ukubhuloga, kufanele ube ku